China Laser igwe ịgbado ọkụ na-emepụta na ndị na-ebu ihe |UNIONLASER
Ụdị: Fiber laser ịgbado ọkụ igwe
Ọnụ ahịa: $4499~$6599
Akwụkwọ ikike:3afọ maka igwe
Ụkpụrụ nke ịgbado ọkụ
Ịgbado ọkụ laser na-eji ọkụ laser ike dị elu na-ekpo ọkụ na mpaghara mpaghara na obere mpaghara.Ike nke radieshon laser na-agbasa n'ime ihe site na nchịkwa okpomọkụ, ihe ahụ na-agbazekwa ka ọ bụrụ ọdọ mmiri a wụrụ awụ.
Isi ịgbado ọkụ
Ọla kọpa nozzles
Nkuku nozzles, U-ụdị (mkpụmkpụ), U-ụdị, nri waya 1.0, nri waya 1.2 Nri waya 1.6
Ngwunye nri waya 1.0: ojiji n'ozuzu maka nri 1.0 waya;
U-ụdị gas nozzle (obere): eji maka ịkwa akwa na ịgbado ọkụ nke ọma;
Ngwunye nri waya 1.2: maka nri 1.2 waya maka ojiji n'ozuzu;
U-ụdị gas nozzle (ogologo): eji maka ịkwa akwa na ịgbado ọkụ fillet dị mma;
Ngwunye nri waya 1.6: ojiji n'ozuzu maka nri 1.6 waya;
Angle ikuku nozzle: eji maka ịgbado ọkụ fillet nwanyị;
Ngwa nri waya ọkwọ ụgbọ ala ugboro abụọ
Isi Welding Qilin.
- Dị arọ ma na-agbanwe agbanwe, njikwa njide bụ ergonomic.
- Igwe mkpuchi nchebe dị mfe iji dochie anya.
- Igwe anya anya dị elu, nwere ike ibu ike 2000W.
- Usoro usoro jụrụ oyi nke sayensị nwere ike ịchịkwa okpomọkụ nke ngwaahịa ahụ nke ọma.
- Ezi akara, nwere ike imeziwanye ndụ ngwaahịa.
Welding version nke na-aga n'ihu eriri laser RFL-C2000H
Ọ nwere ọrụ ntụgharị fotoelectric dị elu, ịdị mma beam dị mma na nke kwụsiri ike, yana ike mgbochi echiche dị elu.N'otu oge ahụ, ọ na-ewebata usoro mgbasa ozi ngwa anya nke abụọ kachasị mma, nke nwere uru doro anya karịa lasers ndị ọzọ nke otu ụdị na ahịa.
Atụmatụ nke ịgbado ọkụ laser
1. Ọsọ ịgbado ọkụ dị ngwa ngwa, ugboro 2-10 ngwa ngwa karịa ịgbado ọkụ ọdịnala, otu igwe nwere ike ịchekwa ma ọ dịkarịa ala 2 welders kwa afọ.
2. The ọrụ mode nke aka-ẹkenịmde ịgbado ọkụ egbe isi na-enyere ndị workpiece na-welded n'ebe ọ bụla na n'akuku ọ bụla.
3. Ọ dịghị mkpa maka tebụl ịgbado ọkụ, obere akara ụkwụ, ngwaahịa ịgbado ọkụ dị iche iche, na ụdị ngwaahịa na-agbanwe agbanwe.
4. Ọnụ ego ịgbado ọkụ dị ala, ike dị ala na ọnụ ahịa mmezi dị ala.
5. Mara mma ịgbado ọkụ onuete: na ịgbado ọkụ onuete bụ ire ụtọ na mara mma na-enweghị ịgbado ọkụ scars, workpiece na-adịghị deformed, na ịgbado ọkụ bụ ike, nke na-ebelata-esochi-egweri usoro na-azọpụta oge na-eri.
6. Enweghị ihe eji eme ihe: ịgbado ọkụ laser na-enweghị waya ịgbado ọkụ, obere ihe oriri, ogologo ndụ, nchebe na gburugburu ebe obibi.
Uru nke ịgbado ọkụ laser
1.The ịgbado ọkụ onuete bụ ezigbo onye mara mma, ọ dịghị ịgbado ọkụ scars, ọ dịghị deformation nke workpiece, ike ịgbado ọkụ, mbenata ụdi polishing usoro, na-azọpụta oge na-eri, na ọ dịghị ịgbado ọkụ onuete deformation.
Enwere ike ịrụ ọrụ ọzụzụ dị mfe, na ngwaahịa ndị mara mma nwere ike welded na-enweghị nna ukwu.
Tụnyere ya na ịgbado ọkụ ọdịnala
Mgbado ọkụ laser
Kalori dị elu
Ọ dị mfe imebi
Obere ma ọ bụ enweghị nrụrụ
Ebe ịgbado ọkụ
Nnukwu ebe ịgbado ọkụ
Ọmarịcha ebe ịgbado ọkụ, ntụpọ nwere ike gbanwee
Na-adịghị mma, ọnụ ahịa polishing dị elu
Dị nro ma mara mma, enweghị ọgwụgwọ ma ọ bụ ọnụ ala dị ala
Ọ dị mfe ntụ
Ọ bụghị adabara perforation, ike na-achịkwa
Ngụkọta oge nhazi
Oke na-ewe obere oge 1:5
Nchekwa onye ọrụ mbụ
Ike ultraviolet siri ike, radieshon
Ikpughe na ìhè fọrọ nke nta ka ọ ghara imerụ ahụ
Ihe ịgbado ọkụ
Aha akụrụngwa Igwe eji agbado ọkụ laser ejiri aka
Ike laser 1000W / 1500W/2000W
Ogologo ogologo nke laser 1080NW
Laser usu ugboro 1-20Hz
Obosara usu 0.1-20ms
Nha ntụpọ 0.2-3.0mm
Ọdọ mmiri ịgbado ọkụ kacha nta 0.1mm
Ogologo eriri Ọkọlọtọ 10M na-akwado ruo 15M
Ụzọ ọrụ Na-aga n'ihu / mmezi
Na-aga n'ihu na-arụ ọrụ oge awa 24
Oke ịgbado ọkụ 0-120mm / s
Igwe mmiri oyi Industrial mgbe niile okpomọkụ tank mmiri
Oke ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ 15-35 ℃
Oke iru mmiri na-arụ ọrụ 70% enweghị condensation
Ọkpụrụkpụ ịgbado ọkụ akwadoro 0.5-0.3 mm
chọrọ oghere ịgbado ọkụ ≤0.5mm
Voltaji na-arụ ọrụ AV380V
N'ikwekọ n'ụkpụrụ ndị mba ụwa nabatara yana ụkpụrụ ụlọ ọrụ maka nnabata.Ụlọ ọrụ ahụ eguzobewo ụkpụrụ zuru ezu maka gburugburu ebe ọrụ na ọnọdụ ọrụ na usoro mmepụta ihe, ihe ndị dị mkpa na-achọrọ nkà na ụzụ, ihe jụrụ oyi, nchekwa radieshon laser, nchekwa eletriki, ụzọ ule, nyocha na nnabata, na nkwakọ ngwaahịa na njem.
Anyị agafeela asambodo usoro njikwa njikwa njikwa mba ụwa nke ISO9001 wee guzobe usoro mmesi obi ike maka imepụta, mmepụta na ọrụ nke obere na ọkara ike laser nhazi akụrụngwa.
Mgbe ebinyechara nkwekọrịta ahụ, Party B ga-emepụta ma rụpụta akụrụngwa n'ụzọ siri ike dabere n'ihe ngosi nka nke nkwekọrịta.Mgbe emechara ngwa ahụ, Party A ga-ebu ụzọ nabata akụrụngwa dịka ihe ngosi teknụzụ nke ebe Party B si dị.Mgbe Party A installs na debugs akụrụngwa, abụọ ọzọ ga-emecha chọpụta na a ga-ekwe omume, kwụsie ike na ntụkwasị obi nke Party A. Dị ka ọkọlọtọ akụrụngwa tupu nnabata.
Mgbe abanyechara nkwekọrịta ahụ, Party B na-echepụta ma rụpụta akụrụngwa nke ọma dịka ihe ngosi nka nke nkwekọrịta siri dị.Mgbe emechara ma rụpụta akụrụngwa, Party A ga-anabata ngwa na ebe Party B dị ka ihe ngosi teknụzụ dị iche iche si dị.A na-etinye ma mebie akụrụngwa ahụ site na Party A. Ọkọlọtọ na-eme nnabata ikpeazụ nke ike akụrụngwa, nkwụsi ike na ntụkwasị obi.
Enwere ntuziaka nrụnye, ntuziaka mmezi, ntuziaka nbudata, ntuziaka ọzụzụ, wdg.
Ngwá ọrụ niile (ma e wezụga akụkụ ndị na-adịghị ike na ihe oriri dị ka eriri na anya anya, ọdachi ndị na-adịghị eguzogide ọgwụ, agha, ọrụ iwu na-akwadoghị, na sabotage mmadụ mere) nwere akwụkwọ ikike nke otu afọ, na oge ikike na-amalite site na ụbọchị. nke nnata nke ụlọ ọrụ gị.Ndụmọdụ teknụzụ efu, nkwalite ngwanrọ na ọrụ ndị ọzọ.Nye ọrụ nkwado teknuzu n'oge ọ bụla iji nagide adịghị mma igwe.
Anyị na-enye ọrụ nkwado teknụzụ n'oge ọ bụla.Party B na-ahụ maka ịnye Party A akụkụ mapụtara dị mkpa ruo ogologo oge.
Oge nzaghachi ọrụ ire ere: awa 0.5, mgbe ị nwetasịrị oku nrụzi nke onye ọrụ, onye injinia na-ere ahịa ga-enwe azịza doro anya n'ime awa 24 ma ọ bụ rute na saịtị akụrụngwa.
Ụkpụrụ mmejuputa ibu ibu
Nrụpụta, nleba anya na ngwaahịa nnabata nke ụlọ ọrụ na-emejuputa ụkpụrụ ụlọ ọrụ.Ụkpụrụ mba ndị ụkpụrụ ụlọ ọrụ rụpụtara bụ:
GB10320 Nchekwa eletriki nke akụrụngwa na akụrụngwa laser
GB7247 nchekwa radieshon, akụrụngwa nkewa, ihe a chọrọ na ntuziaka onye ọrụ maka ngwaahịa laser
GB2421 Usoro ule gburugburu ebe obibi bụ isi maka ngwaahịa eletrọnịkị
GB/TB360 nkọwapụta maka laser ike na ike ule akụrụngwa
GB/T13740 Laser radieshon ụzọ ule divergence akụkụ
GB/T13741 Laser radieshon ihie ụzọ ule dayameta
Nkọwapụta GB/T15490 maka Lasers steeti siri ike
GB/T13862-92 Usoro nnwale ike radieshon
GB2828-2829-87 Nlele oge nke ogbe-na-ogbe site na njirimara njirimara na tebụl nlele.
Nkwenye mma na usoro nnyefe
A. Usoro mmesi obi ike
Companylọ ọrụ ahụ na-achịkwa nke ọma dabere na sistemụ ogo ISO9001 nke mba ụwa nabatara.Iji hụ na ngwaahịa dị mma ma gbochie ngwaahịa na-erughị eru ịbanye n'ime usoro ọzọ, site na nchekwa akụrụngwa mbụ na nnyefe, a ghaghị ịgafe nyocha ịzụrụ, nyocha usoro, na nyocha ikpeazụ.A na-achịkwa usoro mmepụta nke ọma iji nweta ebumnuche nke njikwa dị mma nke ngwaahịa ngwaahịa yana iji hụ na ngwaahịa niile emepụtara bụ ngwaahịa ruru eru.
B. Usoro iji hụ na oge nnyefe
Companylọ ọrụ anyị agafeela asambodo sistemu ogo ISO9001.Mmepụta na arụ ọrụ bụ nke ọma dabere na sistemụ ogo ISO9001.A na-achịkwa usoro niile site na ịbanye nkwekọrịta na nnyefe nye onye ahịa.A ga-enyocharịrị nkwekọrịta niile.Ya mere, usoro ahụ nwere ike ikwe nkwa ndị na-ebubata ngwaahịa na-ebuga ngwaahịa n'oge, na ịdị mma na oke.
Nkwakọ ngwaahịa na njem: Nkwakọ ngwaahịa dị mfe maka njem ala.Nkwakọ ngwaahịa ahụ na-emezu ihe achọrọ nke ụkpụrụ mba, ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị mkpa, ma nakweere mgbochi nchara, mgbochi corrosion, mmiri ozuzo na mgbochi iji hụ na ngwaahịa ahụ emebighị n'oge njem.Ejigharịghị nkwakọ ngwaahịa ahụ.
Nke gara aga: Ihe mmeghe ngwaahịa Cleaner Laser ejiri aka
Osote: Fiber Laser Cutter na 1000W Raycus
Obere eriri Laser welder